GeoGebra: Ngwa mgbakọ na mwepụ maka agụmakwụkwọ na ọkwa niile | Site na Linux
GeoGebra: Ngwa mgbakọ na mwepụ maka agụmakwụkwọ na ọkwa niile
N'oge ndị a ugbu a, karịchaa n'oge Ọrịa ọjọọ nke COVID-19, nke Usoro nkuzi na mmụta chọrọ ngwa ma ọ bụ nyiwe, ọkacha mma n'efu, imeghe na / ma ọ bụ n'efu iji kwado ma gaa n'ihu ha, oku nwere ike ịbịara ndị nwere mmasị GeoGebra.
Ngwa nke Software Nwepu GeoGebra, lekwasịrị anya ebe mgbakọ na mwepụ, karịsịa ka ụlọ ọrụ mmụta na ọkwa niile, dịka ọ na-enye ngwaọrụ na ọrụ maka isiokwu nke som, geometry, algebra, calculus na nyochagụnyere ihe omuma.
Ọtụtụ afọ gara aga, anyị kwuru okwu banyere ya GeoGebra na Blog. Na site n'oge ahụ, anyị kwuru na ndị na-esonụ:
"GeoGebra bụ usoro ihe omimi dị egwu, nke pụtara na ya anyị nwere ike iwepụta ihe site na isi, ngalaba, ahịrị, wdg. ma mee ka ha dị ndụ iji mepụta usoro dị iche iche nke geometric ma si otú a mụta nke ọma ma ọ bụ ka mma kụzie echiche ndị achọrọ. Mana ọ kwụsịghị ebe ahụ; na-ejikwa calculus na algebra n'ime otu gburugburu dị ike".
GeoGebra, mgbakọ na mwepụ na-agagharị
1 Banyere GeoGebra
2 GeoGebra: Na-enye ọtụtụ Ngwa mgbakọ na mwepụ
2.1.1 Site na ndenye ego
2.1.2 Site na Weebụ (Latestdị kacha ọhụrụ dị - 5 na 6)
Otú ọ dị, taa, na Banyere ngalaba GeoGebra nke ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ọ kọwara dị ka:
"GeoGebra bụ sọftụwia sọftụwia maka ọkwa agụmakwụkwọ niile. Di omimi jikọtara jiometrị, algebra, ọnụ ọgụgụ, na mgbakọ na mkpokọta na ndekọ, nhazi, na mpempe akwụkwọ nhazi akwụkwọ. GeoGebra, site na iji ike ya n'efu, na-eweta obodo dị mkpa ma na-eto eto.
N'ụwa niile, ọtụtụ nde ndị na-anụ ọkụ n'obi nabatara ya ma kesaa atụmatụ na ngwa GeoGebra. Mee ka ọmụmụ ihe ahụ dị ike. Ijikọta nnwale na echiche iji nweta nzukọ na ịdọ aka ná ntị nke na-agafe mgbakọ na mwepụ, sayensị, injinia na teknụzụ (STEM: Science Technology Engineering & Mathematics). Obodo ọ na-ejikọ ọnụ na-agbatị ya dị ka akụ na ụba ụwa, dị ike ma na-agbanwe agbanwe maka isi na ajụjụ gboo nke nkuzi na mmụta! ”.
GeoGebra: Na-enye ọtụtụ Ngwa mgbakọ na mwepụ
Ugbu a, GeoGebra dị n'ọtụtụ Ntinye nke nkesa GNU / Linux, ọ bụ ezie na kwa, n'ezie naanị nsụgharị usụhọde ka mbipute 5 ma ọ bụ 6, nke nwere ike ibudata na Budata ngalaba weebụsaịtị ha.
Otú ọ dị, GeoGebra bara uru ngwa ngwo ngwo, nke ahụ bụ, ụdị dị iche iche nke Egwuregwu (Computers, laptop, tablet and mobiles) na Sistemụ arụmọrụ (Windows, Mac, Linux, Android, iOS). Na mgbakwunye, enwere ike iji ya ozugbo site na a Nchọgharị weebụ, site na ebe nrụọrụ weebụ ya. Na mgbakwunye, ọ dị na Ọtụtụ asụsụ, na-agụnye dị ike ngwaọrụ n'ikwekọ na a kensinammuo na agile interface.
Site na ndenye ego
Naanị iwu a ga - egbu:
Site na Weebụ (Latestdị kacha ọhụrụ dị - 5 na 6)
Ozugbo ebudatara na unzipped, dịka ọmụmaatụ, ụdị faịlụ 6, nke aha ya bụ «GeoGebra-Linux64-Portable-6-0-579-0»Ngwa a ga-akpọrịrị ga-eme site na ngwụcha (njikwa) "GeoGebra", dị ka onye ọrụ mgbọrọgwụ na nhọrọ "--no-sandbox" ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Site na otu iwu ndị ahụ, enwere ike ịme njikọ njikọ (nnweta kpọmkwem na menu) iji mezuo ya. Maka ndị ọzọ, ọ fọdụrụ iji ya wee nwee ọmarịcha ikike agụmakwụkwọ niile nke ngwa ọrụ a.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na Free Software ngwa «GeoGebra», nke lekwasịrị anya ebe mgbakọ na mwepụ, karịsịa ka ụlọ ọrụ mmụta na ọkwa niile, dịka ọ na-enye ngwaọrụ na ọrụ maka isiokwu nke «aritmética, geometría, álgebra, cálculo y análisis»gụnyere ihe omuma; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » GeoGebra: Ngwa mgbakọ na mwepụ maka agụmakwụkwọ na ọkwa niile
Dism ++: Mepee ngwa ngwa maka DISM GUI